Dhaxan. Waa maxay, sidee loo sameeyay maxaase ka dhalan kara | Saadaasha Shabakadda
Haddii aad ku nooshahay aag leh jiilaal qabow, hubaal waad soo toosay subaxa qaar dhirta oo dhanna waxaa qariyay lakab khafiif ah oo baraf cad ah. Lakabkaan, oo umuuqda inuu yahay baraf, ayaa loo yaqaan Dhaxan. Waa dhacdo abuuritaanka kristantarro baraf yar oo sameeya tirooyin kristaliin ah. Waxay u janjeeraan inay ka sameystaan ​​agagaaraha gawaarida, daaqadaha, iyo dhirta marka heerkulku aad u hooseeyo habeenkii. Si uu dhaxan u sameysmo, kuma filna oo keliya kuleylka hooseeya, laakiin shuruudo kale waa in la buuxiyo si ay u dhacdo.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa looga baahan yahay iyo sida uu dhaxan u sameysmo? Qodobkaan waxaan kuugu sharaxeynaa wax walboo si faahfaahsan.
1 Buuxinta huurka hawada
2 Sidee dhaxan u samaysmaa
3 Shuruudaha dhaxan inay sameysmaan
4 Cawaaqib xumo
Buuxinta huurka hawada
Hawada aan ku neefsaneyno kaliya iskumid gaasas ay oksijiin iyo nitrogen ku badan yihiin. Waxaa sidoo kale jira qoyaan ama maxaa biyo ku jiray xaalad uumi ah. Sidaan ognahay, saturation-ka hawadu qoyaanku wuxuu kuxiranyahay heerkulka cufnaanta hawada iyo deegaanka. Heerkulka yar ayaynu nahay, sida ugu dhakhsaha badan hawadu waxaa u buuxsama qoyaan. Tani waa waxa dhacaya markaan gaariga gaarno xilliga jiilaalka oo neefsashadeena aan u horseedno daaqadaha inay ceeryaan.
Waxa dhacaya markaan xaaladan galno waa in hawada ku dhex jirta gaariga uu yahay mid qabow, sidaa darteed haddii aan si joogto ah u soo sifeyno hawo qoyaan leh, waan dhergi doonnaa waxayna ku dambayn doontaa isku soo ururin. Si aad uga saarto qulqulka daaqadaha, waa inaan isticmaalnaa kuleylka. Hawada diiran waxay taageertaa uumiga biyaha badan iyadoon isku ururin.
In kasta oo ay umuuqato wax ka soo horjeeda caqli galnimada oo dhan, hawada ka jirta lamadegaanka waxay leedahay uumi-biyood ka badan tan aagga buuraleyda barafka leh. Maxaa dhacaya markaa? Hagaag, cufnaanta hawadu oo leh heerkul sareeya waxay awood u leedahay inay hayso uumiga biyaha oo badan iyadoon isku ururin.. Tan waxaa loo yaqaan dhibic dharab ah. oo tilmaamaya heerkulka ay hawadu ka dheregsan tahay huurka oo ay bilaabeyso inay isku uruursato. Waxaa la mid ah ceeryaanta aan soo daayo habeennada qabow ee qabow.
Sidee dhaxan u samaysmaa
Mar alla markii aan ogaanno barta dhammaystirka hawada ee huurka, waxaan fahmi karnaa sida uu dhaxan u sameysto. Hagaag, maaddaama hawada aan neefsanayno ay kujirto qoyaan, haddii heerkulku aad u hooseeyo, uumiga biyuhu ma koobna oo keliya, wuxuu isu beddelayaa xaalad adag. Si uu dhaxan u sameysmo, waa inuu jiraa heer-kul hoose oo ka hooseeya kan barta buuxinta hawada.
Markay habeen tahay, qorraxdu way joogsataa inay siiso kuleylka deegaanka hawaduna waxay bilawdaa inay si dhakhso leh u qabowdo. Dhulku wuu ka qabowjiyaa xitaa si ka dhakhso badan hawadu. Haddii dabayl jirin, hawadu waxay ku qabowdaa lakabyo. Hawada ka qabow, waa cufan tahay, marka waxay ku degtaa dusha sare. Dhinaca kale, hawada kululaaneysa waxay kusii nagaan doontaa meelaha sare, maadaama ay ka cufan tahay.
Marka cufnaanta hawo qabow ay u soo degto dusha sare, heerkulka ayaa hoos u sii dhici doona sababo la xiriira saamaynta qabow ee u dhexeeya cufnaanta hawada iyo dhulka qabow. Tani waxay ka dhigeysaa heer-kulku mid ka hooseeya barta dhererka qoyaanka ee hawada, sidaa darteed uumiga biyuhu wuxuu isku ururinayaa dhibco biyo ah. Haddii heerkulka jawigu ka yar yahay 0 darajo oo aysan jirin dabayl baabi'isa xasilloonidaas, the dhibco biyo ah lagu xareeyay dusha sare sida caleemaha dhirta, daaqadaha gaariga, iwm. Waxay isu rogi doonaan kiristaalo baraf ah.
Tani waa sida dhaxantu u dhacdo habeennada qaboobaha.
Shuruudaha dhaxan inay sameysmaan
Sidaan soo aragnay, waxaan ubaahanahay hawada inay ka hooseyso eber darajo, dabayl la'aan iyo hawaduna ay laqabsato qoyaan. Cimilada meelaha hawadu way qallalan tahay, ma arki doontid dhaxan soo koraysa xitaa haddii heerkulku yahay -20 digrii ama ka yar. Xaqiiqda ah in biyuhu barafeeyaan ilaa eber darajo run ma ahan run. Waxaa naloo baray tan iyo yaraantoodii in barta barafka ee biyuhu ay tahay eber darajo, laakiin taasi sinnaba sinaba ugama jirto.
Biyaha dabiiciga ah badanaa waxay leeyihiin wasakhda sida boodhka, dhibcaha dhulka ama walax kasta oo kale oo u shaqaysa sidii uumiga uumiga uumiga. Tan macnaheedu waxa weeye in walxahaasi ay u shaqeeyaan sidii bu'di u sameysma dhibco biyo ah ama, xaaladdan oo kale, kiristaalo baraf ah. Hadday biyuhu gebi ahaanba nadiif ahaanayeen, oo aan lahayn nukliyeer isu-ururin, heer kulka -42 digrii ayaa loo baahan lahaa si biyuhu uga beddelaan dareeraha una noqdaan xaalad adag.
Tani sidoo kale waa mid ka mid ah sababaha meelaha qaarkood oo leh boodh hawo sare leh ay u jiraan roobab xoog leh oo lama filaan ah. Tani waa sababta oo ah waxaa jira isku uruuris aad u sarreeya oo isu-ururinta uumiga sameysmaya daruuraha dhibcaha biyuhuna waxay samaysmaan roobab ka hor.
Nuuliyiintan uumiga ayaa sidoo kale laga heli karaa dusha sare ee aan soo sheegnay, sida baabuurta, galaaska ama biyaha oo ah duulista hawada iyada oo loo marayo isweydaarsiga gaaska ee dhirta. Dusha sare ee warshadda ayaa sidoo kale laga yaabaa inay leedahay dhibco boodh ah, ciid, iwm. Taasi waxay u shaqeysaa sidii uumiga uumiga ee sameynta kiristaalo baraf ah.
Dhaxan laftiisu khatar ma aha waxay kuxirantahay dusha sare halka laga soo saaro Haddii aan dhaxan ku leenahay laamiga waxay sababi kartaa shil taraafiko sababo laxiriira liita ee giraangiraha dhulka iyo siigo lama filaan ah. Dhanka kale, waxa jira dhir badan oo dalagyo ah oo aan u dulqaadan dhaxan iyo dhaxan yar. Noocyada noocan ah xaaladaha, dalagyada ayaa si daran u saameyn kara.
Meelaha intiisa kale, dhaxan badanaa dhibaato ma keento. Waxay si fudud u kordhisaa dareenka qabow.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkani kaa caawin doono inaad wax badan ka barato dhaxan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Dhaxan